သူမရဲ့ black baby လေးရဲ့ ချစ်တက်ပုံတွေကို အခုလို ချပြလာတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ – MC Tv Club
သူမရဲ့ black baby လေးရဲ့ ချစ်တက်ပုံတွေကို အခုလို ချပြလာတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ
မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ချစ်ရတဲ့သူက စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရင် ပို လှလာတယ် ဆိုသလိုပဲ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပို လှလာတာ ကလည်း အနားကနေ ဘာမဆို support ပေးတတ်တဲ့ချစ် သူကောင်လေး ကြောင့်နေပါလိ မ့်မယ်။
မကြာသေးခင်က ချစ်သူကော င်လေးကိုတရားတ င်ချပြခဲ့ပြီးကော င်လေးနဲ့ အRo ပုံတွေကိုလ ည်း တင်ထား ခဲ့ပါသေးတယ်။ပုရိဿတို့ အသည်းစွဲမမ သင်ဇာဟာ ‌ချစ်သူ မောင်လေးကို အရမ်းချ စ်သလို ချစ်သူမောင်လေးကလည်း မမသင်ဇာကို အရမ်းချစ် တာ သိသာပါတယ်။
မကြာခင်ရက်ပိုင်းက မမသင်ဇာဆိုထား တဲ့ကျေနပ်တယ် သီချင်း Mtvမှာ ချစ်သူနဲ့အတူတူ သရုပ်ဆောင်ထားတာ အားလုံးကြည့် ပြီးကြမှာပါ။ သရုပ်ဆောင် ချက်တွေကအရ မ်းပီပြင်လွန်းလို့ ပရိတ်သတ်ေ တွro လိုက်တာ အူယား ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
အခုလည်း မမသင်ဇာနဲ့ MTV ရိုက် တုန်းက behind the sence video လေးကိုသင်ဇာ့ချစ် သူကောင်ေ လးကအမှတ်တရ တင်ထားခဲ့ပါတ ယ်နော် ကဲ ဘယ်လောက်လိုက်ဖက် ညီလိုက်သလဲ?
အခုတစ်ခါမှာဆို ရင်သရုပ်ေ ဆာင်သင်ဇာဝင့်ေ ကျာ်ကချစ်သူလေး နဲ့အမိုက်စား ဓာတ်ပုံတွေကိုအ ခုလိုချပြလာ ခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်က Thx for everything my lovely black babe ဆိုပြီးသူမရဲ့ လူမှုကွန် ယက်စာမျ က်နှာထက်မှာရေး သားဖော်ပြ ထားပါတယ် ၊စာဖတ်ပရိတ် သတ်ကြီး များအတွက်ပြန် လည်တင်ဆ က်ပေးလိုက်ပါတ ယ်နော်။
သူမရဲ႕ black baby ေလးရဲ႕ ခ်စ္တက္ပုံေတြကို အခုလို ခ်ျပလာတဲ့ မတ္မတ္သင္ဇာ
မိန္းကေလးေတြဆိုတာ ခ်စ္ရတဲ့သူက စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားရင္ ပို လွလာတယ္ ဆိုသလိုပဲ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ပို လွလာတာ ကလည္း အနားကေန ဘာမဆို support ေပးတတ္တဲ့ခ်စ္ သူေကာင္ေလး ေၾကာင့္ေနပါလိ မ့္မယ္။
မၾကာေသးခင္က ခ်စ္သူေကာ င္ေလးကိုတရားတ င္ခ်ျပခဲ့ၿပီးေကာ င္ေလးနဲ႕ အRo ပုံေတြကိုလ ည္း တင္ထား ခဲ့ပါေသးတယ္။ပုရိႆတို႔ အသည္းစြဲမမ သင္ဇာဟာ ‌ခ်စ္သူ ေမာင္ေလးကို အရမ္းခ် စ္သလို ခ်စ္သူေမာင္ေလးကလည္း မမသင္ဇာကို အရမ္းခ်စ္ တာ သိသာပါတယ္။
မၾကာခင္ရက္ပိုင္းက မမသင္ဇာဆိုထား တဲ့ေက်နပ္တယ္ သီခ်င္း Mtvမွာ ခ်စ္သူနဲ႕အတူတူ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာ အားလုံးၾကည့္ ၿပီးၾကမွာပါ။ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကအရ မ္းပီျပင္လြန္းလို႔ ပရိတ္သတ္ေ တြro လိုက္တာ အူယား ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။
အခုလည္း မမသင္ဇာနဲ႕ MTV ရိုက္ တုန္းက behind the sence video ေလးကိုသင္ဇာ့ခ်စ္ သူေကာင္ေ လးကအမွတ္တရ တင္ထားခဲ့ပါတ ယ္ေနာ္ ကဲ ဘယ္ေလာက္လိုက္ဖက္ ညီလိုက္သလဲ?
အခုတစ္ခါမွာဆို ရင္သ႐ုပ္ေ ဆာင္သင္ဇာဝင့္ေ က်ာ္ကခ်စ္သူေလး နဲ႕အမိုက္စား ဓာတ္ပုံေတြကိုအ ခုလိုခ်ျပလာ ခဲ့ပါတယ္ေနာ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က Thx for everything my lovely black babe ဆိုၿပီးသူမရဲ႕ လူမႈကြန္ ယက္စာမ် က္ႏွာထက္မွာေရး သားေဖာ္ျပ ထားပါတယ္ ၊စာဖတ္ပရိတ္ သတ္ႀကီး မ်ားအတြက္ျပန္ လည္တင္ဆ က္ေပးလိုက္ပါတ ယ္ေနာ္။
Previous Article လူကို ချစ်ရင် သူမရဲ့ အနုပညာကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရေကြည်ချမ်းမြေ့
Next Article ချစ်လင်ကို တီတီတာတာနဲ့ အပိုင်ချုပ်ပစ်လိုက်တဲ့မအေးသောင်း